संयुक्त राज्य अमेरिका कोसमस सुइट्स कोरियाली एयरलाइनमा कोरियाको सियोल
संयुक्त राज्य अमेरिका कोसमस सुइट्स कोरियाली एयरलाइनमा
पोस्ट Gyopo Tacticool Oppa पुनः लोड भयो | एयरलाइन्स | 0
कोरिया छोडेर जानु दुखको छ, तर फ्लाइ K KAL फर्स्ट क्लास यसको लागि निर्मित!
मैले ईन्चियनको ओराकाई होटेल छोडे, KAL बसमा मेरो क्यारीन झोला र सामान लिएर इन्चेन अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट सम्म लाग्यो। यो दक्षिण कोरिया मा मेरो अन्तिम दिन थियो। मैले सियोलमा केहि आकर्षणहरू भ्रमण गरेको थिएँ र मेरा साथीहरूलाई बिदा दिन भनेका थिए।
म त्यस रात हावामा हुन्थें, दक्षिण कोरिया छोडेर सैन फ्रान्सिस्को अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्टको लागि। म जान चाहन्न, तर मसँग अन्य विकल्प थिएन। मेरो जागिरले मलाई संयुक्त राज्यमा फिर्ता लग्यो। तर यसको मतलब जब म फर्कें यो अझ राम्रो हुनेछ।
म कोरियाली एयरलाइन्स फर्स्ट क्लास कोसमोस सुइट २.० मा सान फ्रान्सिस्को, क्यालिफोर्नियामा फर्कें, गोपनीयता स्लाइडिंग ढोका सहितको! मैले यो सिटको लागि नगद भुक्तान गरें किनभने आरक्षणको समयमा मसँग पर्याप्त अ didn't्कहरू थिएन, र म हवाइजहाजमा सुत्ने निद्रा पाउन चाहान्थे। मैले एक रकम छुट ट्राभल टिकट एजेन्सीबाट टिकट खरीद गरें, त्यसैले मलाई स्प्याम टिप्पणी नगर्नुहोस्। मैले टिकटको लागि पूर्ण मूल्य तिरेको छैन।
मलाई इन्चियोन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा लैजान केएल बसमा सवार हुँदा मैले झ्यालबाट बाहिर हेरे, शहरमा लगिरहेको थिएँ र कोरियाली जनताको दैनिक जीवन हेरे जुन उनीहरू दृश्यबाट गायब हुनु अघि केही सेकेन्ड सम्म देखा पर्‍यो।
साना बच्चाहरू स्कूल जाँदै थिए; ट्याक्सी चालकहरूले उनीहरूको गन्तव्यमा पुगिरहेका थिए, कलेजका विद्यार्थीहरू उनीहरूको कक्षाको लागि र केही मानिसहरू तिनीहरूका कुकुरहरू पनि लिएर। मानिसहरु म जस्तो आफ्नो दैनिक जीवन को बारे मा जाँदै थिए। मेरो लागि, म बसमा सवार थिएँ इन्चेन एयरपोर्टबाट संयुक्त राज्य अमेरिकाको लागि फेरि उडान लिन।
इनचान अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट कोरियाको सबैभन्दा ठूलो अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट हो। यो निर्माण १ 1996 2001 in मा शुरू भयो र २००१ मा व्यापारका लागि खोलियो। यसमा दुई टर्मिनलहरू छन्, टर्मिनल १ र टर्मिनल २। यो योंगजोन्ज ब्रिजमार्फत मुख्य भूमि कोरियासँग जोडिन्छ। विकास निर्माण आज सम्म जारी छ।
KAL बस कोरियाली एयरलाइन्सको प्रस्थान टर्मिनलमा रोकियो र म बसबाट उतरें। कोरियन एयरलाइन्सको आफ्नै बसहरू छन् जुन ईन्चेन एयरपोर्टबाट सियोलको मार्ग पछ्याउँदछन्। ओराकाई होटल सहित धेरै अलग बस स्टपमा बस स्टपहरू। बस झोला डिब्बेको मुनिबाट मेरो झोलाहरू लिएर म टर्मिनलमा गएँ। एयरपोर्ट विशाल छ, र यो अझै प्रख्यात देखिन्छ किनभने म हराएको थियो।
मलाई थाहा थिएन कि कोरियाली एयरलाइन्स प्रथम श्रेणी चेक-ईन कहाँ थियो। मैले वरपर सोधें र पत्ता लगाए कि यो मँ भएको अर्को छेउमा थियो। म मेरो व्यायाममा गएँ र त्यहाँ हिंडें, दृढ संकल्प गरे र प्रेरित गरें कि म आफैंले प्रथम श्रेणीको लाउन्जमा र हवाइजहाजमा निर्दोष छु।
मैले कोरियाली एयरलाइन्सको प्रथम श्रेणीको चेक-ईन फेला पारे। कोरियाली एयरलाइन्सको चेक-इन गर्नका लागि प्रथम श्रेणीका यात्रुहरूको लागि आरक्षित क्षेत्र छ। नयाँ चेक-इन क्षेत्र व्यापक छ, पहिलो श्रेणीका यात्रुहरूको लागि सिट र कन्सेरज लग्गेज ह्यान्डलिंगको साथ। वरपरका पर्खालहरूले लाउज चेक-इन क्षेत्रलाई बाँकी एयरपोर्टबाट अलग गर्दछ। यो निजी र विशाल देखिन्छ। मलाई मेरो कोरियाली एयरलाइन्स SKYPASS चयन भिसा हस्ताक्षर कार्ड चाहिएको छैन।
ढोकाबाट हिंड्ने बित्तिकै मलाई एउटा चेक इन एन्ट्यान्टले स्वागत गर्यो। एकचोटि उसले मेरो टिकट प्रमाणीकरण गर्‍यो, मलाई पहिलो श्रेणीको ब्यागेज चेक-इन लाउन्ज मार्फत देखाईयो। त्यहाँ केएलका अन्य परिचारकहरूले मेरो झोला लिएर गए, तिनीहरूलाई तौल गरे र जाँचे यी सबै सीमा शुल्क भएर जानु अघि।
मलाई चेक इन गरीएको थियो र सीमा शुल्क र सुरक्षा चौकीमा अगाडि बढेको थियो, एयरपोर्टको एयरसाइडमा हिंड्नु अघि अन्तिम स्टप। म कुनै पनि मुद्दाहरू बिना भन्सार मार्फत जारी राखें र वरिपरि हेरेर मैले प्राप्त गरें, मेरो बेयरिंगहरू र दिशाको भावना पाउँदै।
म कोरियाली एयरलाइन्स फर्स्ट क्लास लाउंज खोज्दै थिए। मैले स्थानको बारेमा महान कुराहरू सुनेको थिएँ र म त्यहाँ जान उत्सुक थिए।
मलाई शुल्क मुक्त एयरपोर्ट स्टोरहरूमा किनमेल गर्न रुचि थिएन, म लाउन्जमा बस्न, खानपिन गर्न चाहान्छु। मैले लिफ्ट पाए जुन मलाई दोस्रो तलामा लग्यो, किनकि KAL प्रथम-श्रेणी लाउन्ज दोस्रो तलामा छ।
मेरो KAL प्रथम श्रेणी बोर्डि ticket टिकट देखाइए पछि, म KAL पहिलो कक्षाको प्रवेश द्वारबाट गए। यो मैले कोरियाली एयरलाइन्सको आशा गरेको सबै थोक थियो। म भित्री सजावट र सजावटबाट प्रभावित भएँ। खाना उत्कृष्ट थियो, र विभिन्न पेय प्रशस्त थिए।
मैले निजी बस्ने स्थान समातेको छु, गोपनीयताको भावना प्रदान गर्न भित्ताहरू भएको सिटमा। मेरो क्यारोन झोला त्यहाँ छोडेर, म भोजन गर्ने ठाउँमा गएँ र त्यहाँ प्लेट र खाना र केही पेय पदार्थ समातें। उडान अघि hours घण्टा बाँकी भएकोले मैले विश्राम गर्ने, खाने र मेरो ल्यापटपबाट केही चलचित्रहरू हेर्ने विचार गरें। केहि पनि एक आराम क्षण पल्टाउनु छैन मलाई शान्ती गर्न पहिलो वर्ग विमान अगाडि अघि सवारी अघि।
समय बित्यो र यो चाँडै गेट २ 267 मा हिँड्नको लागि समय थियो। यो मेरो लागि दुःखको क्षण थियो किनभने हरेक पार गर्ने मिनेटको मतलब म कोरियामा छुट्टिन जाँदैछु। म ढोकामा हिंड्दा, मैले विभिन्न चीजहरूको बारेमा सोच्न थालें। मैले केहि स्टोरहरू भ्रमण गरें र मुख्यतया मेरो गल्ली २ 267 to मा हिंड्नको लागि फिल्म खिच्नमा धेरै खर्च गरे।
म जानाजानी केही मिनेट बाँकी गेटमा पुग्यो किनकि मलाई विमानमा चढ्न लाइनमा कुर्नु मनपर्दैन। पनी प्रथम श्रेणीमा जाँदा पनि। म बोर्डि gate गेट भएर गए र विमानमा पैदल यात्रा शुरू गरे। विमानमा हिंड्ने बित्तिकै मलाई थाहा थियो कि कोरियामा मेरो समय लगभग सकियो।
मैले मेरो बोर्डि pass पास देखायो र फ्लाइट एटेंडन्टहरू दिशातिर बाँया जानका लागि, म विमानको अगाडि गएँ। त्यो त्यहाँ Kosmos Suites 2.0 छ। मैले आफूलाई प्रथम श्रेणीको केबिनमा, Kosmos Suites 2.0 भेट्टायो! के यो मैले आशा गरेको सबै थोक थियो?
हो, यो थियो! मैले मनपराएको प्राथमिक सुविधा निजी स्लाइडिंग ढोका थियो। सिंगापुर एयरलाइन्स फर्स्ट सुइट र एएनए एयरलाइन्स बिजनेस क्लास “कोठा” सँग निजी स्लाइडिंग ढोका पनि छ। मलाई वास्तवमा कोसमस सुइट २ मा निजी स्लाइडिंग ढोका मनपर्‍यो।
मैले मेरो मानार्थ सुविधा किट खोले, दुबै प्याक भयो, र मेरो वाहक झोला भित्र मानार्थ चप्पल र एक पेय र पागल आदेश दिए। म Kosmos Suites 2.0 को पूर्ण विलासी आरामको मजा लिइरहेको थिए र टेक अफका लागि तयार थियो।
कोसमस सुइट २.० को बारेमा सबै कुरा, हेरेर सफा र शान्तिमय महसुस गर्यो। चाँडै म बसे पछि, म फेरि झुकाउन र सुत्न चाहन्थे। तर मैले खाना याद गर्दिन, त्यसैले मैले निर्णय गरे कि यो सही निर्णय होईन।
मैले मेरो प्रथम श्रेणीको सूटको वरिपरि हेरें, यस सूटको सबै सुविधाहरू लिँदै। म उडान अन्त्य गर्न चाहन्न, किनकि मेरो लागि यो उडान कोसमस सुइट २.० भित्र पहिलो श्रेणीको अनुभवको बारेमा थियो, र ११+ घण्टा मात्र पर्याप्त देखिँदैन।
विमान उडानमा गयो र पूरै मोड लिनको लागि अगाडि बढ्यो, सैन फ्रान्सिस्कोको लागि। म उडान अन्त्य गर्न चाहन्न। मैले B777-300ER आईसीएन SFO टेकऑफमा फिल्माएँ, र हामी हावामा उड्ने बित्तिकै, मैले मेरो बेलुकाको खानाको आदेश दिए।
रात्रिभोजको लागि प्रतिक्षा गर्दै गर्दा मैले जहाजमा मनोरन्जन चलचित्र चयनबाट के चलचित्रहरू खेलिरहेका थिए भनेर हेरेँ। मैले स्यान फ्रान्सिस्कोको उडानमा तीन ()) चलचित्रहरू हेर्ने निर्णय गरें, र आफैंलाई आरामदायी झपकी लिन, र बिहानको खाजा खानको लागि केही समय दिएँ।
यो त्यस्तो बेला थियो जब मेरो खाना आइपुगेको थियो।
जस्तो कि मैले पहिले भनें, "एक पटक तपाई पहिलो कक्षामा जानु भयो, तपाई फेरि इकॉनोमि क्लासमा जान सक्नुहुन्न।" मैले अमेरिकाबाट कोरियामा पहिलो वर्षको प्रथम उडान उडान नगरेसम्म म कहिले पनि छुटेको थिइन।
कोरियाली एयरलाइन्स कोरियाका लागि आधिकारिक एयरलाइन हो। यदि तिनीहरूले अर्थव्यवस्था, व्यापार, र प्रथम श्रेणी मा केबिन अनुभव अपग्रेड गर्न, म आफूलाई भविष्यमा KAL मा धेरै पटक उडान देख्न। यदि केटीहरु जेनेरेसन SNSD केटी सदस्यहरु कोरियाई एयरलाइन्स उडान, म पनि सक्छु। कसलाई थाहा छ, म भविष्यमा ती मध्ये कुनै एउटा देख्न सक्छु, र यदि म गर्छु भने, म यसलाई पोस्ट गर्नेछु र भिडियो अपलोड गर्दछु। यदि होईन भने, म तिनीहरूको पहिलो ईतिहास हेर्न जान्छु जब म फिर्ता जान्छु एसएमटाउन संग्रहालय।
तल कोरियाली एयरलाइन्स B777-300ER Kosmos Suites 2.0 मा संयुक्त राज्य अमेरिका फिर्ता मेरो भिडियो को समीक्षा हो।
"यहाँ प्रामाणिकसँग छलफल गर्नुहोस्सियोल कोरिया युट्यूब च्यानल।"सदस्यता लिनुहोस्, हेर्नुहोस्, टिप्पणी दिनुहोस् र मनपर्‍यो।
SOK राष्ट्रको सदस्य बन्नुहोस्! केपप, स्नातक डिग्री, र बल्गोगी समावेश छैन!
यो तपाईं हो जसले हामीलाई रातभरि जागा रहन प्रेरणा दिन्छ मोमबत्तीहरू लेख्नको लागि। सारंग हाई यो!
पछिल्लोसियोल मा। सुवान हलिडे इन एक्सप्रेस।
अर्कोसियोल मा। सियोल अटो सैलुन २०१।।